Masaka Gabatee - Gosaa fi Haala isaa sirreessi
Dirreewwan kee filamaniif odeeffannoo dirree adda baasi.
Odeeffannoo dirree gulaaluuf dirree filadhu.
Dirree filatamee galfata tokkoo ol tarriicha keessa sochoosuf cuqaasi.
Dirree filatamee galfata tokkoo gadi tarriicha keessa sochoosuf cuqaasi.
Tarree saanduuqaa keessaa dirree filaman haqi.
Tarree saanduqaa keessatti deetaa haaraa ida'i.
Maqaa dirree deetaa filame agarsiisa. Yoo barbaadde,maqaa haaraa galchuu dandeessa.
Gosa dirree filadhu.
Yoo Eeyyee ta'e, the values for this data field are generated by the database engine.
Yoo Eeyyee ta'e, dirreen kun duuwwaa ta'uu hin qabu.
Dirree deetaaf lakkoofsa arfiilee adda baasa.
Dirree deetaaf lakkofsa iddoo deesiimaalii adda baasa. Filannoon kun kan jiraatu lakkofsaaf ykn deesiimaalii qofaaf jiraata.
Gatii durtii dirree Eeyyee/Lakki adda baasa.
Fakkeenya kanaaf, isa AUTO_INCREMENT jedhu saanduqa himaa Ofna-dabalame jedhutti galchi.
Masaka Gabatee -Furtuu Dursaa Sirreessi
Title is: Masaka Gabatee - Gosaa fi Haala isaa sirreessi